व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — गणतन्त्रको घोषणादेखि संघीयताको सूत्रपातले संघीय गणतान्त्रिक मुलुकका रूपमा नेपाललाई परिभाषित गरिसकेका छौं । यस्ता परिभाषा संसारका थोरै राष्ट्रले मात्र हासिल गर्न सकेका छन् । हामी आफ्नो राज्यव्यवस्थाप्रति गौरवमय अनुभूति गर्छौं ।
देशको व्यवस्था सार्वभौम आमनागरिकमा निहित रहेको ठान्छौं । सबैको अनुकूल गणतन्त्र र संघीयतासहितको संविधान बनाउन निम्ति महिनौंसम्म विरोध, आमहडताल र नाकाबन्दीसमेत गर्न कहिल्यै हटेका छैनौं हामी । हाम्रो इच्छाशक्तिमा बेजोड दृढता र संघर्षको सम्मिश्रण छ भन्नु जायज हुन्छ । हामी समयको तालमा व्यवस्था परिवर्तन गर्छौं तर विडम्बना अवस्था बदल्न पराजित भएका छौं । करिब २ दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहेको स्थानीय निकायलाई पुनर्जन्म दिएर अधिकारसम्पन्न बनाउन कोसिस गरे पनि असफल भएका छौं । आमजनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुने नयाँ सरकार बनेपछि देशको रूप फेरिन्छ भन्ने सपना तहसनहस भएको छ । सरकारको संख्या बढाउन हामीले कुनै कसर बाँकी राखेनौं । आखिर ७६१ सरकार बनाउँदा के व्यवस्थाका साथ अवस्था फेरियो त ? के जनताको बेथिति खतम भयो त ?
संघीयताले गर्दा दिनपरदिन नेताहरू मोटाउँदै गएका र जनता दिनपरदिन दुब्लाउँदै गएको ज्वलन्त उदाहरण हामीमाझ छ । संघीयताले राजनीतिज्ञको चेहरा मात्र बढायो, देशको ढुकुटी खाने मुख मात्र बढायो । अहिले पनि विगतकै परिपाटीमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । जनताको विडम्बना कागजमा समेट्न लायक छैन । संघीयताको देनस्वरूप महँगी र कर बढाएर जनताको दैनिकीमा प्रहार भएको छर्लंग छ ।
– ऋतिक यादव सिम्रौनगढ–१०, बारा